Igwe Redio Radio Satelital | NASSAT
Internet Satellite na Mgbasaozi Agbanwe Agbanwe
Intanet site na Satellite
Intanet site na Satellite, Telephones, Multicast, wdg.
InicioPage nke a
Obere ụgbọ elu
Mgbe ụfọdụ Maritime
Ịntanetị na Ụgbọ oloko
Site na Satellite Telephones
Ebumnuche nke Satellite Radioelectric Spectrum - The Frequencies
N'ihe banyere telivishọn nkwurịta okwu, òkè redio redio ha na-eji ga-ekpebi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile: ike usoro, ike na ọnụahịa. Ya mere, anyi ga - achikota nkenke nkenke nke igwe eji eme ihe n 'okpukpu abuo. Ihe omuma nke di na nke a abughi ihe omuma ma ozi ohuru bia kwa ubochi.
Ogologo ntụgharị dị iche iche nwere ụdị dị iche iche. Ogologo ogologo oge nwere ike ịga ebe dị anya na ihe mgbochi cross. Nnukwu ogbugba mmiri nwere ike gbaa ụlọ gburugburu ma ọ bụ gafee ugwu, mana elu ya (ya mere mkpuru ogologo).
Mgbe oge dị oke (anyị na-ekwu maka ọtụtụ iri gigahertz), ebili mmiri nwere ike ịkwụsị ihe ndị dị ka akwụkwọ ma ọ bụ mmiri ozuzo, na-eme ka ihe a na-akpọ "mmiri ozuzo". Iji merie nke a, ọ dị mkpa ka a dịkwuo ike, nke pụtara na ndị transmitters dị ike karị ma ọ bụ eriri anya ndị a na-elekwasị anya, nke na-eme ka ọnụahịa nke satịlaịtị mụbaa.
Ihe ndị dị elu (Ku na ụsụụ ndị agha) bụ na ha na-ekwe ka ndị transmitters zipụ ozi ndị ọzọ kwa nkeji. Nke a bụ n'ihi na a na-edebekarị ihe ọmụma na akụkụ ụfọdụ nke ebili mmiri ahụ: crest, ndagwurugwu, mmalite ma ọ bụ njedebe. Nkwekọrịta dị elu bụ na ha nwere ike iburu ozi ndị ọzọ, ma ha chọrọ ikike ka ukwuu iji zere nkwụsị, nnukwu antenna na ihe ndị dị oké ọnụ.
N'ụzọ doro anya, ihe ndị a na-ejikarị eme ihe na sistemụ satellite bụ:
Oge ọtụtụ: 1.53-2.7 GHz.
Uru: nnukwu ntụgharị dị iche iche nwere ike ịbanye n'ime ihe owuwu ụwa; ha chọrọ transmitter ike.
Ọghọm: obere ikike nnyefe data.
Ogologo oge: na ntinye 11.7-12.7 GHz, nakwa na 14-17.8 GHz.
Uru: ọkara ntụgharị nke na-agabiga ọtụtụ ihe mgbochi ma bufee ọtụtụ data.
Ọghọm: ọtụtụ n'ime ebe a na-ekpe ikpe.
Oge ọtụtụ: 18-31 GHz.
Uru: ọtụtụ ebe dị iche iche dị; Ogologo oge na-ebu nnukwu data.
Ihe ọghọm: ọ dị mkpa ka transmitters dị ike; enwe mmetụta maka nchekasị gburugburu ebe obibi.
Nkọwa nke aha nke ụyọkọ ugboro ugboro:
Ihe kachasị ọhụrụ na teknụzụ satellite!
Nata ozi sitere n'aka ụwa
Iji wepu aha, biko pịa ebe a »
Ọdịdị nke Satellite
Kedu ihe bụ satellite?
Usoro Ọzụzụ Nkà na ụzụ
Ọkwọ ụgbọala / Ntuziaka
Ndị ahịa nweta
Copyright © 2003 - Ikike niile echekwara - Nassat Development Satellite Systems
Onye na-enyocha ọrụ Ingº Carlos Montero